သင့်ဘဝကိုရှုပ်ထွေးစေခြင်းမရှိဘဲဒီခရစ်စမတ်ကိုမည်သည့် ၀ ယ်ယူရမည်နည်း eReaders အားလုံး
သင့်ဘဝကိုရှုပ်ထွေးစေခြင်းမရှိဘဲဒီခရစ်စမတ်ကိုမည်သည့် ၀ ယ်ယူရမည်နည်း
Joaquín Garcia က | | BQ, ကုမ္ပဏီများမှ, tablets
ဒါဟာထပ်တလဲလဲဆောင်ပုဒ်ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့အဲဒါဖြစ်ပျက်ကြောင်းအရာတစ်ခုခုသည်။ eReader တစ်ခုတွင်တက်ဘလက်ကိုအသုံးပြုလိုသောစာဖတ်သူများစွာရှိကြသည်။ အကြောင်းမှာအလွန်ရှင်းပါသည်၊ ၎င်းတို့သည်ဗီဒီယိုများ၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ကောင်းမွန်သော ebook ဖတ်နိုင်ခြင်းအပြင် YouTube ကိုနားထောင်ခြင်းကိုပိုမိုနှစ်သက်ကြသည်။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ဤအဘို့ နည်းနည်းလမ်းညွှန်။ လူများစွာသည်ဤလက်ဆောင်များကိုမပေးနိုင်ကြကြောင်းငါသိသည် ခရစ်စမတ်အခြားသူများကမူဘုရင်များနေ့အတွက်ထားခဲ့ကြလိမ့်မည် ခရစ်စမတ်နေ့သင်ကံကောင်းရင်ဒီလမ်းညွှန်ကသင့်ကိုကောင်းကောင်းအကျိုးပြုနိုင်တယ်။
ငွေအမြောက်အများကိုမသုံးချင်။ ဘဝကိုမရှုပ်ထွေးစေလိုသူများအတွက် - သူတို့မှာသူတို့လိုအပ်တာအားလုံးနီးပါးရှိသည်။ ဖတ်နိုင်၊ ဗီဒီယိုကြည့်နိုင်၊ သွားနိုင်ပါကွန်ပျူတာဂုရုဖြစ်စရာမလိုဘဲအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုကိုတင်ပြသည် စာအုပ်စာအုပ်နှင့်အတူ Tagus တက်ဘလက်။ ဤစက်၏စျေးနှုန်းသည်လက်ရှိတွင်ယူရို ၇၉.၉၀ ရှိပြီး၎င်းသည်စျေးနှုန်းချိုသာသောစျေးနှုန်းဖြစ်သည်။ မျက်နှာပြင်သည် ၇ လက်မခန့်သာဖတ်ရန်အတွက်ပြီးပြည့်စုံသည်သာမကကျွန်ုပ်တို့၏မျက်လုံးများကိုနှောင့်ယှက်စရာမလိုဘဲဗွီဒီယိုများကိုကြည့်ရှုရန်သို့မဟုတ်ကြည့်ရှုရန်အလွန်ကောင်းမွန်သော resolution ရှိသည်။
ဒီခရစ်စမတ်အတွက်ပိုမိုဈေးကြီးတဲ့အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်ပေမယ့် Tagus Tablet လိုပဲဆက်ဖြစ်နေ ဦး မှာပါ အဆိုပါ Nexus 7ကျွန်ုပ်တို့အားတူညီသောသက်သောင့်သက်သာရှိစေသော်လည်း၎င်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အလွန်စျေးကြီးသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည် အဆိုပါ Tagus Tablet ကို။ ဤကိရိယာကို Casa del Libro ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ရှာနိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းကိုမည်သည့်စတိုးဆိုင်တွင်မဆိုဝယ်နိုင်သည် စာအုပ်စာအုပ်ဒါကြောင့်ဒီခရစ်စမတ်အတွက်ငါတို့အချိန်ဖြုန်းဖို့အချိန်ရသေးတယ်။
ဒီခရစ္စမတ်ပွဲကိုဒီခရစ္စမတ်နဲ့မရှုပ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် (သို့) New Technologies ကိုကောင်းကောင်းနားမလည်သူတွေအတွက်နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာကတော့ Ipad Mini ဖြစ်တယ်။ ဒီစာဖတ်သူတွေ၊ သုံးစွဲသူများအတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီကိရိယာရဲ့အားနည်းချက်တစ်ခုကတော့လက်ရှိမှာ ၂၈၉ ယူရို (ဒေါ်လာ ၂၈၉) ကျသင့်မှာဖြစ်ပြီး၎င်းဟာ Android tablet များနဲ့သိပ်မကွာပါဘူး။
ဟာ့ဒ်ဝဲနည်းနည်းလေးနဲ့မလိုချင်ဘူး၊ အိမ်ကိုပြတင်းပေါက်ကနေမထုတ်ပစ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်ပိုပြီးကောင်းမွန်တဲ့ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကတော့ tablet တွေရဲ့။ Bq စာရှုသူများ။ တကယ်တော့ ဟင်း2အနည်းငယ်အတွေ့အကြုံရှိသောအသုံးပြုသူများအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည် နည်းပညာအသစ်များ. Curie ၂ ၎င်းတွင် ၈ လက်မအရွယ်မျက်နှာပြင်ရှိပြီး Android operating system ကိုအသုံးပြုထားကာ resolution 8 x 1024 ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဗွီဒီယိုများကိုဖတ်ရှုခြင်း၊ ကြည့်ခြင်းနှင့်ကြည့်ရှုခြင်းအတွက် Curie 768 ကိုအလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောကိရိယာဖြစ်စေသည်။ ထို့အပြင်၎င်း၏စျေးနှုန်းသည် Apple ထုတ်ကုန်များထက်ပိုမိုကျိုးကြောင်းဆီလျော်သည်။ ၎င်း၏ကုန်ကျစရိတ်မှာယူရို ၁၅၀ မှ ၂၀၀ အထိရှိသည်။ ကိရိယာများ Bq ၎င်းတို့သည်အွန်လိုင်းစတိုးမှတစ်ဆင့် ၀ ယ်ယူနိုင်ခြင်းအပြင်လက်ရှိစပိန်နိုင်ငံရှိရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစတိုးဆိုင်များစွာတွင်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်အဝေးဆုံးသောသူများအတွက်ဒီခရစ်စမတ်ကာလအတွင်း၎င်းကိုဝယ်ယူရန်သည်ကြီးမားသောပြproblemနာဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်မထင်ပါ။
ဒါပေမယ့်ငါတို့ပေးချင်တဲ့သူကအရမ်းအစွမ်းထက်တဲ့အရာတစ်ခုကိုလိုချင်လားဒါမှမဟုတ်အကောင်းဆုံးကိုပေးချင်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, အခြားနည်းလမ်းဖြစ်ကြသည် Google Nexus 10၊ Apple iPad သို့မဟုတ် Samsung Galazy Note Tab 10။ သူတို့က 10 »၏တက်ဘလက်များနှင့်မြင့်မားသောစျေးနှုန်းနှင့်အတူဖြစ်ကြသည်။ အခု၊ အကျိုးကျေးဇူးများအရ၊ ဤစက်ပစ္စည်းများ၏ပြproblemနာမှာ၎င်းတို့သည်စျေးအလွန်ကြီးပြီး၊ Apple ipad, ကျန်ပစ္စည်းတွေအလွယ်တကူမရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, ဒီခရစ္စမတ်ငါအလယ်အလတ် option ကိုပယ်ရှားလိမ့်မယ်, ငါ, ငါဘေးဖယ်ထားလိမ့်မယ် Tagus တက်ဘလက် ရွေးချယ်ဖို့ ဟင်း2ဒါမှမဟုတ်ငါကပိုပြီးအားကောင်းတဲ့တက်ဘလက်တစ်ခုကိုဝယ်ဖို့အခွင့်အရေးကိုစွန့်ခွာလိမ့်မယ် Tablet လောကရှိစာဖတ်သူတစ် ဦး အတွက်မျက်နှာပြင်သည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကိရိယာ၏ရှေ့တွင်နာရီများစွာအကုန်ခံပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ကျန်းမာရေးကိုပျက်စီးစေနိုင်သောကြောင့်အကောင်းဆုံးမျက်နှာပြင်လိုအပ်သည်။ ဖြစ်လာခဲ့လျှင် Curie ၂တစ်ဦး 8″ တက်ဘလက်7than ထက်ပိုကောင်းတယ်။ လျှောက်လွှာပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်စီမံခန့်ခွဲနိုင်စွမ်းနှင့် ပတ်သက်၍ Android ပေါ်တွင်အခြေခံထားခြင်းအားလုံးသည်တူညီသောသို့မဟုတ်အလားတူအဆောက်အအုံများရှိသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုကျွန်ုပ်သည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာဟုမယူမှတ်ပါ။
အမေဇုံရွေးချယ်စရာရှိတယ်ဆိုတာငါသိတယ်၊ ငါတို့ကဒီအကြောင်းတွေကိုဝဘ်ပေါ်မှာအများကြီးပြောရင်ငါဘာလို့မဖော်ပြတာလဲလို့မင်းတော်တော်များများတွေးမိလိမ့်မယ်။ လူတစ် ဦး သည်တက်ဘလက်ကိုဗီဒီယိုကြည့်ရှုရန်ပြhavingနာမရှိဘဲ Amazon ကိုအလိုရှိလျှင် Amazon နှင့် Google Apps များကိုအလွန်တရာချစ်မြတ်နိုးမှုမပြုလုပ်သောကြောင့်အဖြေမှာအဖြေမဟုတ်ပါ။ သင်တက်ဘလက်ကိုစာဖတ်ရုံသာရှိစေချင်လျှင်၊ Kindle Fire HD ဒါဟာကောင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလမ်းညွှန်ကဒီခရစ္စမတ်ပွဲကိုသင်ရွေးချယ်ဖို့ကူညီလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်အားလုံးကသင်တက်ချင်တဲ့သူပေါ်မူတည်တယ်ဆိုတာသတိရပါ။ စစ်မှန်တဲ့အဖြေကသင့်အတွက်ဖြစ်တယ်။ ပျော်ရွှင်ဖွယ်အားလပ်ရက်များ!!!
ပိုမိုသိရှိလိုပါက - တက်ဘလက်များသည်ကျောင်းသားများ၏ဖိအားကိုပိုမိုနှစ်သက်သည်။ ရောနှောထားသော iPad Mini, Kindle Fire HD နှင့် Nexus7duel …,
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - eReaders အားလုံး » ကုမ္ပဏီများမှ » BQ » သင့်ဘဝကိုရှုပ်ထွေးစေခြင်းမရှိဘဲဒီခရစ်စမတ်ကိုမည်သည့် ၀ ယ်ယူရမည်နည်း
ငါအရမ်းအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ရွေးချယ်စရာ2လက်လွတ်။ 10″ အလယ်အလတ်အကွာအဝေးအထိယူရို 300
Bq Edison2(32Gb) 16 နှင့်အတူ 1Gb RAM သာရှိသည်
FBReader, ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ဖတ်ရန်မိုဘိုင်း application
"အလွန်ပုဂ္ဂိုလ်ရေး Sabina", Sabina အသစ်လက်ရာ